Sir Bobby.. Check again, Please…by Evra (ဆာဘော်ဘီရယ်.. တစ်ခေါက်လောက် ပြန်ကြည့်ပေးပါဦး.. ) – the One Sports Journal
Sir Bobby.. Check again, Please…by Evra (ဆာဘော်ဘီရယ်.. တစ်ခေါက်လောက် ပြန်ကြည့်ပေးပါဦး.. )
June 1, 2021 author one articles 0
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နာမည်ကျော်နောက်ခံလူဟောင်း အီဗရာကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကို မခံချိမခံသာဖြစ်အောင် အခုရက်ပိုင်း တောက်လျှောက်လှောင်ပြောင်နေပါတယ်။
‘Once A Red Always A Red’ ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲ အီဗရာဟာ ယူနိုက်တက်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကမ္ဘာမကြေပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးအသင်းကို အခုထိအမြင်ကပ်နေပုံရပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ချယ်လ်ဆီးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးကတည်းက ဆက်တိုက်လှောင်တော့တာပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက Instagram မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုင်ထားတဲ့ ဆာဘော်ဘီချာလ်တန်နဲ့အတူ သူ့မျက်နှာကို Photoshop နဲ့ အစားထိုးပြီး အဲဒီပုံပေါ်မှာ “Sir Bobby can you check for City’s name again? “Nope, still not here Pat “လို့ စာရေးသား Troll ခဲ့ပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ‘ဆာဘော်ဘီရေ .. ဖလားပေါ်မှာ မန်စီးတီး နာမည်လေးများတွေ့မလားလို့ ထပ်ရှာကြည့်ပါဦး..’ အေး ..အခုအချိန်ထိတော့ မတွေ့သေးဘူးကွ ..ပက်ရေ’ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။
အဲဒီပုံနဲ့အတူ အီဗရာက ‘ဆာဘော်ဘီကို (ဖလားပေါ်မှာ မန်စီးတီးနာမည် ပါ၊မပါ) နောက်တစ်ခေါက်လောက် ထပ်ကြည့်ခိုင်းရမယ့်ပုံပဲ’ဆိုပြီး Caption ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ အီဗရာက မန်စီးတီးကို လှောင်ရတာ ဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်သေးပါဘူး။
ဒီတစ်ခါကျတော့ မန်စီးတီးအသင်းအမာခံပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ Oasis ဂီတအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း လီယန်ဂါလက်ဂါကို လှောင်တဲ့အနေနဲ့ လီယန်ဂါလက်ဂျာဆံပင်ပုံစံနဲ့တူအောင် ဆံပင်တုစွပ်၊ မျက်မှန်တပ်ပြီး
“လီယန်ရေ ..မင်း ဘယ်ရောက်နေတာတုန်း။
ယူနိုက်တက်အသင်း ရှုံးတုန်းက မင်းငါ့ကို လှောင်ထားတာ မှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လား . .အခုတော့ မင်းအလှည့်ပဲကွ။ မန်ချက်စတာဆိုတာ အပြာရောင်လို့ နောက်ထပ်မပြောနဲ့တော့ . .ငါရခဲ့တဲ့ ဆုဖလားတွေက မင်းတို့တစ်သင်းလုံးပေါင်းပြီး ရခဲ့တဲ့ဖလားတွေထက် ပိုများတယ်”လို့ Twitter ပေါ်မှာ ရုပ်သံဖိုင်တင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေကတော့ အီဗရာရဲ့ ရုပ်သံကို အားပါးတရအားပေးခဲ့ကြပြီး တစ်ယောက်က ‘ဒီဘဲကြီး လုပ်တာနဲ့ ငါတော့ ရီရလို့အူတက်သေတော့မှာပဲ။
မန်စီးတီးကို လှောင်တာတွေ ဘယ်တော့မှ မရပ်လိုက်ပါနဲ့’လို့ အားပေးအားမြှောက်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အီဗရာဟာ မန်စီးတီးအပြင် တစ်ခါတလေကျရင် လီဗာပူးလ်အသင်းကိုလည်း လှောင်ပြောင်တာမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ်မရလို့ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်နေတာကြောင့် ‘အားငယ်နေတဲ့ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေကို ထပ်မစပါနဲ့တော့ ..အီဗရာရေ’လို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ် . .
Sir Bobby.. Check again, Please…by Evra (ဆာေဘာ္ဘီရယ္.. တစ္ေခါက္ေလာက္ ျပန္ၾကည့္ေပးပါဦး.. )
မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ နာမည္ေက်ာ္ေနာက္ခံလူေဟာင္း အီဗရာကေတာ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲမွာ ရႈံးပြဲေတြ႕ခဲ့တဲ့ မန္စီးတီးအသင္းကို မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေအာင္ အခုရက္ပိုင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ေလွာင္ေျပာင္ေနပါတယ္။
‘Once A Red Always A Red’ ဆိုတဲ့စကားအတိုင္းပဲ အီဗရာဟာ ယူႏိုက္တက္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ကမာၻမေၾကၿပိဳင္ဘက္ မန္စီးတီးအသင္းကို အခုထိအျမင္ကပ္ေနပုံရၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲမွာ ခ်ယ္လ္ဆီးကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးကတည္းက ဆက္တိုက္ေလွာင္ေတာ့တာပါပဲ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းတုန္းက Instagram မွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားကိုင္ထားတဲ့ ဆာေဘာ္ဘီခ်ာလ္တန္နဲ႔အတူ သူ႔မ်က္ႏွာကို Photoshop နဲ႔ အစားထိုးၿပီး အဲဒီပုံေပၚမွာ “Sir Bobby can you check for City’s name again? “Nope, still not here Pat “လို႔ စာေရးသား Troll ခဲ့ပါတယ္။
အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ‘ဆာေဘာ္ဘီေရ .. ဖလားေပၚမွာ မန္စီးတီး နာမည္ေလးမ်ားေတြ႕မလားလို႔ ထပ္ရွာၾကည့္ပါဦး..’ ေအး ..အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ မေတြ႕ေသးဘူးကြ ..ပက္ေရ’ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။
အဲဒီပုံနဲ႔အတူ အီဗရာက ‘ဆာေဘာ္ဘီကို (ဖလားေပၚမွာ မန္စီးတီးနာမည္ ပါ၊မပါ) ေနာက္တစ္ေခါက္ေလာက္ ထပ္ၾကည့္ခိုင္းရမယ့္ပုံပဲ’ဆိုၿပီး Caption ေရးခဲ့ပါေသးတယ္။ အီဗရာက မန္စီးတီးကို ေလွာင္ရတာ ဒီေလာက္နဲ႔မေက်နပ္ေသးပါဘူး။ ဒီတစ္ခါက်ေတာ့ မန္စီးတီးအသင္းအမာခံပရိသတ္ျဖစ္တဲ့ Oasis ဂီတအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း လီယန္ဂါလက္ဂါကို ေလွာင္တဲ့အေနနဲ႔ လီယန္ဂါလက္ဂ်ာဆံပင္ပုံစံနဲ႔တူေအာင္ ဆံပင္တုစြပ္၊ မ်က္မွန္တပ္ၿပီး
“လီယန္ေရ ..မင္း ဘယ္ေရာက္ေနတာတုန္း။
ယူႏိုက္တက္အသင္း ရႈံးတုန္းက မင္းငါ့ကို ေလွာင္ထားတာ မွတ္မိေသးတယ္မဟုတ္လား . .အခုေတာ့ မင္းအလွည့္ပဲကြ။
မန္ခ်က္စတာဆိုတာ အျပာေရာင္လို႔ ေနာက္ထပ္မေျပာနဲ႔ေတာ့ . .ငါရခဲ့တဲ့ ဆုဖလားေတြက မင္းတို႔တစ္သင္းလုံးေပါင္းၿပီး ရခဲ့တဲ့ဖလားေတြထက္ ပိုမ်ားတယ္”လို႔ Twitter ေပၚမွာ ႐ုပ္သံဖိုင္တင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြကေတာ့ အီဗရာရဲ႕ ႐ုပ္သံကို အားပါးတရအားေပးခဲ့ၾကၿပီး တစ္ေယာက္က ‘ဒီဘဲႀကီး လုပ္တာနဲ႔ ငါေတာ့ ရီရလို႔အူတက္ေသေတာ့မွာပဲ။
မန္စီးတီးကို ေလွာင္တာေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မရပ္လိုက္ပါနဲ႔’လို႔ အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။
အီဗရာဟာ မန္စီးတီးအျပင္ တစ္ခါတေလက်ရင္ လီဗာပူးလ္အသင္းကိုလည္း ေလွာင္ေျပာင္တာမ်ိဳးလုပ္တတ္ပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္မရလို႔ မန္စီးတီးပရိသတ္ေတြ စိတ္ပ်က္ေနတာေၾကာင့္ ‘အားငယ္ေနတဲ့ မန္စီးတီးပရိသတ္ေတြကို ထပ္မစပါနဲ႔ေတာ့ ..အီဗရာေရ’လို႔ပဲ တိုက္တြန္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္ . .
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ လူကာကူကို နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ရဲ့ နံပါတ်တစ်ပစ်မှတ် အဖြစ် သတ်မှတ်ထား
ယူနိုက်တက် လူငယ်ကစားသမား ဒိုင်လန်လီဗစ်ရဲ့ အိပ်မက် တကယ်ဖြစ်လာပြီ